Women's Day Archives - WITNESS Blog
Documenting SGBV Crimes during Conflict: Community Healing for Rohingya Women and Girls	This blog post is part2of2posts. Read part 1 here. Content warning/trigger warning: sexual violence. Rohingya lawyer and educator Razia Sultana isastrong advocate for the rights of her people, and since 2014, has worked with some of the 900,000 Rohingya refugees now in Cox’s Bazar, Bangladesh. She has been working […]	WITNESS ASIA	March 31, 2022
ကော့ဘဇား မှ -ပဋိပက္ခအတွင်း SGBV ရာဇ၀တ်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း	ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်သည် ပို့စ် ၂ ခု၏ အပိုင်း ၁ ဖြစ်သည်။ ဒီစာကို အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ပါ။ အကြောင်းအရာသတိပေးချက်/အစပျိုး သတိပေးချက်- လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု။ နိဒါန်း Razia Sultana သည် ရိုဟင်ဂျာရှေ့နေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှင့် ပညာပေးသူ ဖြစ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက သူမသည် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ၉၀၀,၀၀၀နှင့် အတူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ကော့ဘဇာ တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။ သူမသည် လိင်နှင့် ကျားမအခြေခံအကြမ်းဖက်မှုမှ လွတ်မြောက်လာသူများဖြစ်ကြသည့် ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးများနှင့် အနီးကပ်လုပ်ဆောင်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမှလွတ်မြောက်ရန် မကြောက်မရွံ့ ထွက်ပြေးလာခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ၏ ဇာတ်လမ်းများကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ Razia သည် မြန်မာစစ်တပ်မှ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများကို […]	WITNESS ASIA	March 18, 2022
Documenting SGBV Crimes during Conflict: The View from Cox’s Bazar	This blog post is part 1 of2posts. This blogpost is also available in Burmese. Content warning/trigger warning: sexual violence. Introduction Rohingya lawyer, activist, and educator Razia Sultana isastrong advocate for the rights of her people. Since 2014, she has worked with some of the 900,000 Rohingya refugees now in Cox’s Bazar, […]	WITNESS ASIA	March 7, 2022